ျမန္မာ ေရႊတံဆိပ္အမ်ားဆံုရတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကာယဗလႏွင့္ ကာယႀကံ႕ခိုင္မႈၿပိဳင္ပြဲ - 9style
May 20, 2019 TjrxgWfzULaCgCdvDELatest News / အားကစားသတင္း
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင် အဖြစ် ကျင်းပသည့် အရှေ့တောင် အာရှ ကာယဗလနှင့် ကာယကြံ့ ခိုင်မှုပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာက ရွှေကိုးခုအပါအဝင် ငွေ ၁၀ ခု၊ ကြေးရှစ်ခု ဆုတံဆိပ်စုစုပေါင်း ၂၇ ခု ဆွတ်ခူးပြီး နိုင်ငံအလိုက် အဆင့်ရပ် တည်မှု၌ ပထမရရှိခဲ့သည်။
(၁၆) ကြိမ်မြောက် South East Asia Bodybuilding and Physique Sports Championships ပြိုင်ပွဲကို မေလ ၁၈ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ ရန်ကုန်မြို့ မင်းဓမ္မ လမ်းရှိ MCC ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲတွင် အိမ်ရှင် မြန်မာ အပါအဝင် ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီး ရှား၊ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတို့မှ အားက စားသမားပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
အိမ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်များကို အသက် (၂၁) နှစ်အောက် ဂျူနီယာကာယဗလ ပြိုင်ပွဲတွင် မျိုးစိုင်းဦး၊ အမျိုးသား (၅၅) ကီလိုတန်း ကာယဗလ ပြိုင်ပွဲတွင် ကျော်မင်းသန်း၊ အမျိုး သား (၆၀) ကီလိုတန်း ကာယဗလ ပြိုင်ပွဲတွင် မိုးဆွေ၊ အမျိုးသား Sports Physique Up to (170 cm) ပြိုင်ပွဲတွင် ငြိမ်းချမ်း၊ အမျိုး သမီး Fitness Physique အလွတ် တန်းပြိုင်ပွဲတွင် သဲစု၊ အမျိုးသား ၈၀ ကီလိုတန်းတွင် ခင်မောင် ကျော်၊ အမျိုးသား athletic physique (over 167 cm) တွင် မျိုး ဆက်အောင်၊ အမျိုးသမီး athletic physique (up to 160 cm) တွင် နှင်းနှင်းအေး၊ အမျိုးသမီး athletic physique (over 160 cm) တွင် ဝတ်ရည်ဖြိုးတို့ကဆွတ် ခူးခဲ့သည်။ မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ သည် အခြားအမျိုးအစားပြိုင်ပွဲ များတွင်လည်း ငွေ ၁၀ ခုနှင့် ကြေးရှစ်ခုရရှိခဲ့သည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် အားကစားနည်း ၂၂ မျိုး ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ပြီး အိမ်ရှင်မြန်မာအနေဖြင့် ကစား နည်းအားလုံး၌ ဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲ ပွဲစဉ်အားလုံးအပြီး ဒုတိယနေရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တတိယနေရာတွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့က အစဉ်လိုက်ရပ်တည် သည်။
“ဝိတ္တန္းမတူေပမယ့္ စိတ္ပူစရာ မရွိပါဘူး. .ယွဥ္ျပိုင္ဖို့ မေစာင့္နိုင္ေတာ့ဘူး. .”ဆိုတဲ့ ေအာင္လအန္ဆိုင္း
ကမၻာ့ အဆင့္ ၇၀ အထိ ျမင့္တက္သြားတဲ့ ၾကက္ေတာင္မယ္ေလး သက္ထားသူဇာ
ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ေတြနဲ႔ ထိုးျပီး ကမာၻ႕အဆင့္လို႔ ေျပာေနတဲ့ ေဒ့ဗ္ကို ေဝဖန္လိုက္တဲ့ ထြန္းထြန္းမင္း